မနတေတျတော့ဘူးကှ – My Blog
ဒီနကေ့မြှ ယမငျး လညျး ဘာဖွဈမှနျးကို မသိ စိတျထဲ တဈခုခု လိုအပျနတေယျ ထငျနရေသညျ။ အခုဆို ယမငျး တဈယောကျ ရညျးစားနဲ့ ပွတျတာ ၆ လ လောကျရှိပွီ ဖွဈသညျ။ ယမငျး ထိထိမိမိ ရညျးစားထားဖူးတာ တဈခါပဲ ရှိသေးတယျ။ အခု အဲဒီရညျးစားတဈယကျေနဲ့ ပကျြပွီး အသဲကှဲပွီးခါစ လေးပဲ ရှိသေးတယျ။ ယမငျး ဘဝမှာ အတူအိပျခဲ့ဖူးတာဆိုလို့ ပကျြသှားတဲ့ ရညျးစားပဲရှိတယျ။ အဲဒီ ရညျးစားနဲ့ကွိုကျတာ တဈနှဈကြျောလောကျပဲ ရှိသေးတယျ ပကျြသှားတာလေ။ ကောငျလေးက နောကျရညျးစားရသှားတာပေါ့။ အဲ့ဒီ အရငျရညျးစားတုနျးကဆို တဈလကို တဈခါလောကျဖွဈဖွဈ ကောငျလေး အဆောငျကို လိုကျပွီး ခဈြပှဲဝငျခဲ့ဖူးတယျ။ အဲ့ဒီတော့ ယမငျး တဈယောကျ ကာမ အရသာကို သိနပွေီး ဖွဈသညျ။ အခုလညျး ရညျးစားနဲ့ပွတျပွီး ၆ လလောကျကွာတော့ မသိတဲ့ ကာမစိတျက တောငျးတနသေလို ထငျရသညျ။ အသဲကှဲတဲ့ ဝဒေနာကိုလညျး ကုစားခငျြနသေလိုလိုပေါ့။
အရငျ ရညျးစားနဲ့တှဲတုနျးက ယမငျး ကို ကွိတျကွှနေတေယျ့ ကိုအောငျ ဆိုတဲ့ အကိုကွီး တဈယောကျတော့ ရှိတယျ။ ယမငျး က သူ ကွိတျကွှနေတောကို မသိ။ ဒီလိုပဲ ရငျးနှီးခငျမငျ နကွေတယျပဲ ထငျနခေဲ့တာ။ ယမငျး အခု ဘဲနဲ့ ပွတျတော့ အဲ့ဒီ လူက အထိတထိ ရိသဲ့သဲ့ လုပျနတော ကွာပွီ။ ယမငျး က ပိနျပိနျသှယျသှယျလေး ဖွဈနပွေီလေ။ ကိုအောငျ ဆိုတဲ့ အကိုကွီးကတော့ ဗလတောငျ့တောငျ့ ၀၀ ဖိုငျ့ဖိုငျ့ ခနျ့ခြောကွီး ပုံစံမြိုး လူတှေ မွငျလိုကျတာနဲ့ လေးစားသှားမယျ။ နတောထိုငျတာကတော့ အေးအေးဆေးဆေး ပုံစံပဲ။ ဒါပမေယျ့ သူက စားဘဲကွီး ဖွဈတာ ယမငျး သိသညျ။ ဒါပမေယျ့ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈလေ ယမငျး စိတျထှကျပေါကျတော့ ရှာခငျြမိနသေညျ။ ကိုအောငျ က ယမငျးကို အားရငျ အားသလို မထိတထိ ဖုနျးနဲ့ လှမျးလှမျးကလိပေးတတျသညျ။ အလုပျနားရကျတှခေ့ငျြတာတို့ ဘာတို့ပေါ့။ ဘယျသူမှ မသိအောငျ တှပေ့ါ့မယျ ယမငျး သိက်ခာ မထိခိုကျစရေဘူး ကတိပေးပါတယျဆိုပွိး ခဏ ခဏ ပွောတတျသညျ။
ဒါပမေယျ့ ယမငျးက သူပွောတိုငျး ငွငျးငွငျး လှတျသလိုလုပျသညျ။ ယမငျး စိတျထဲကတော့ အဲ့ဒီလူကွိးရဲ့ တောငျးဆိုမှုကို လိုကျလြောခငျြသညျ။ အခုဆို ကွာလာတော့ ယမငျး စိတျမထိနျးတော့ဘဲ ဒီတဈခါ ဒီဘဲကွီး ချေါရငျ တှဖေို့ ခေါငျးညိမျ့လိုကျတော့မယျ စဉျးစားထားသညျ။ အဲ့ဒီ ဘဲကွီးက သူအားမှ ဖုနျးဆကျတတျတာကွောငျ့ ၃ ရကျ ၄ ရကျလောကျကွာမှ ဖုနျးဆကျလာသညျ။ ယမငျးလညျး ဟနျဆောငျ မနတေော့ပဲ ဟုတျကဲ့ အကိုကွီးတှမေ့ယျလေ ပွောသညျ။ တှမေ့ယျ့နကွေ့တော့ ယမငျး အလုပျမှ ခှငျ့ယူထားလိုကျသညျ။ သူငယျခငျြးတှေ မေးတော့ နသေိပျမကောငျးလို့ နားသညျပွောထားလိုကျသညျ။ နလေ့ညျပိုငျး အဲဒီ ဘဲကွီးက ယမငျးကို လာချေါသညျ ။ ယမငျးလညျး လိုကျသှားလိုကျသညျ။ ဘဲကွိး အိမျတှငျ ဘယျသူမှ မရှိ။ အိမျရောကျသညျနဲ့ ယမငျး အပေါ့အပါးလေး သှားလိုကျသညျ။ ဘဲကွီးက အခနျးထဲ ချေါသညျ။ နှဈယောကျအိပျမှယေ့ာကွီး ပျေါသို့ ယမငျးကို ထိုငျခိုငျးလိုကျသညျ။
ယမငျးလညျး စိတျတှေ အရမျးလှုပျရှားနသေညျ။ ဘဲကွီးက ယမငျး ပါးပွငျ တဈခုလုံး အားရပါးရနမျးပွိး တှခေ့ငျြနတောကွာပေါ့ ယမငျးရယျဆိုပွီး နှုမျးခမျးလေးကိုပါ စုပျနတေော့သညျ။ ယမငျးလညျး စိတျတှေ ပါနပွေီ ဖွဈတော့ ဘဲကွီးက အဝတျတှေ အကုနျခြှတျပေးသညျ။ ယမငျး ငွိမျနလေိုကျသညျ ဘဲကွိးက ယမငျး ပေါငျသှယျသှယျလေး နှဈခြောငျးကို ကားခိုငျးလိုကျပွီး ခေါငျးအတငျးဝငျပွီး ယမငျး အဖုတျလေးကို ဘာဂြာ ကြှေးတော့သညျ။ ယမငျးက ငရဲကွီးတော့မှာပဲ ကိုကွီးရယျ ဆိုပွီး အတငျးငွငျးပမေယျ့ မရ ဘဲကွီးက အတငျး လြှာဖြားလေးနဲ့ စောကျစိလေးကို ယကျပေးသညျ။ ယမငျး ဘယျလိုခံစားရမှနျးကို မသိ စိတျတှေ အရမျးထနျလာသညျ။ ဘဲကွိး ခေါငျးကို အတငျးဖိထားလိုကျမိသညျ။ အား… အား…….အာ……ကိုကွီးရယျ ဘယျလိုမွနျးလုပျနလေညျး ယမငျး မနတေတျတော့ဘူးကှာ ဘဲကွီး လီးကွိးကလညျး ထောငျမတျနသေညျ။ ယမငျလညျး လီးကွီးကိုကွညျ့ပွီး အလိုးခံခငျြစိတျတှေ ဖွဈနသေညျ။
ဘဲကွီးက ဘဘေီ ကိုကွီး လိုးတော့မယျဆိုတော့ ယမငျး ခေါငျးလေးကို အသာလေး ငွိမျ့ပွလိုကျသညျ။ ယမငျး ပေါငျလေးကို ကားလိုကျပွီး ဘဲကွီးက လီးကွီးနဲ့ ယမငျး စောငျပတျအ၀ လေးကို တပွေီ့း သှငျးလိုကျတော့သညျ။ ယမုငျးလညျး အရမျးတောငျ့တနတေော့ အား……….ဆိုအျောပွီး ဘဲကွီး ကို အတငျးဖကျထားလိုကျသညျ။ အရမျးကောငျးတာပဲ ယမငျးရယျ …..တဲ့။ ယမငျးလညျး အရမျးကောငျးတာပဲ ကိုကွီးရယျ ………….ဆိုပွီး အောကျကနေ ပငျ့ဆောငျ့ပေးနသေညျ။ ဘဲကွီးက အားရပါးရ ဆောငျ့လိုး ပေးနသေညျ။ အား……..ကိုကွီး………အား…………အား…. နာနာလေးဆောငျ့ပါနျော ယမငျးအရမျးကောငျးနပွေီ ဗှကျ ဗှကျ ဗှကျ စောကျရညျနဲ့ လီးအဝငျ အထှကျသံတို့ ဆူညံနတေော့သညျ။ လောကကွီးကိုမထေ့ားပွီး ကာမစညျးစိမျးကို ခံစားနကွောတော့သညျ။ ၁၀ မိနဈလောကျကွာတော့ ယမငျး ပွီးခငျြနပွေီ ကိုကွီး လိုးစမျးပါ အားရပါးရ လိုးပါ… ဘဲကွီးလညျး ……….ယမငျး စောကျဖုတျကလေးကို အတငျးဆောငျ့လိုးသညျ…။
အား………အား……အာ…..ကိုကွီး ယမငျး……ပွိးတော့မယျ……လိုးပါ ကှာ……………။ ဘဲကွီး လညျး ပွီးတော့မယျ ဆိုပွီး အခကျြ ၂၀ လောကျ ဆောငျ့လိုးလိုကျတော့ ယမငျး ……အား …ဆိုပွီး ပွီးသှားတော့သညျ။ ဘဲကွီးကတော့ ယမငျး အထဲကို သုတျရညျတှေ မထညျ့ပဲ ယမငျး ဗိုကျပျေါသို့ ထုတျလိုကျတော့သညျ။ယမငျးလညျး ဘဲကွီးကို စှဲသှားလတေော့သညျ။ စားဘဲကွီးမှနျးသိပမေယျ့ ယမငျးအတှကျတော့ မကျမောစှဲလနျးနမေိတော့သညျ။ အရမျးကောငျးတာပဲ ယမငျးရယျ ဆိုပွီး နှဈယောကျသားအိပျပြျောသှားတော့သညျ။ ညနေ တဈရေးနိုးလာတော့ နှဈယောကျသား တဈခါ လိုးလိုကျသေးသညျ။ ပွီးတော့ ဘဲကွီးက ယမငျးကို အဆောငျပွနျလိုကျပို့ပေးသညျ။ တဈလ တဈခါလောကျ တှကွေ့မယျ ယမငျးရယျဆိုတော့ ယမငျး လညျး တှခေ့ငျြတယျလို့ ပွောလိုကျသညျ။ ဘဲကွီးနဲ့ ယမငျး လတိုငျးလိုလို ခြိနျးပွီး လိုးကွလတေော့သညျ ….ပွီးပါပွီ။
ဒီနေ့ကျမှ ယမင်း လည်း ဘာဖြစ်မှန်းကို မသိ စိတ်ထဲ တစ်ခုခု လိုအပ်နေတယ် ထင်နေရသည်။ အခုဆို ယမင်း တစ်ယောက် ရည်းစားနဲ့ ပြတ်တာ ၆ လ လောက်ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ ယမင်း ထိထိမိမိ ရည်းစားထားဖူးတာ တစ်ခါပဲ ရှိသေးတယ်။ အခု အဲဒီရည်းစားတစ်ယေက်နဲ့ ပျက်ပြီး အသဲကွဲပြီးခါစ လေးပဲ ရှိသေးတယ်။ ယမင်း ဘ၀မှာ အတူအိပ်ခဲ့ဖူးတာဆိုလို့ ပျက်သွားတဲ့ ရည်းစားပဲရှိတယ်။ အဲဒီ ရည်းစားနဲ့ကြိုက်တာ တစ်နှစ်ကျော်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ် ပျက်သွားတာလေ။ ကောင်လေးက နောက်ရည်းစားရသွားတာပေါ့။ အဲ့ဒီ အရင်ရည်းစားတုန်းကဆို တစ်လကို တစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ် ကောင်လေး အဆောင်ကို လိုက်ပြီး ချစ်ပွဲဝင်ခဲ့ဖူးတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ယမင်း တစ်ယောက် ကာမ အရသာကို သိနေပြီး ဖြစ်သည်။ အခုလည်း ရည်းစားနဲ့ပြတ်ပြီး ၆ လလောက်ကြာတော့ မသိတဲ့ ကာမစိတ်က တောင်းတနေသလို ထင်ရသည်။ အသဲကွဲတဲ့ ဝေဒနာကိုလည်း ကုစားချင်နေသလိုလိုပေါ့။
အရင် ရည်းစားနဲ့တွဲတုန်းက ယမင်း ကို ကြိတ်ကြွေနေတယ့် ကိုအောင် ဆိုတဲ့ အကိုကြီး တစ်ယောက်တော့ ရှိတယ်။ ယမင်း က သူ ကြိတ်ကြွေနေတာကို မသိ။ ဒီလိုပဲ ရင်းနှီးခင်မင် နေကြတယ်ပဲ ထင်နေခဲ့တာ။ ယမင်း အခု ဘဲနဲ့ ပြတ်တော့ အဲ့ဒီ လူက အထိတထိ ရိသဲ့သဲ့ လုပ်နေတာ ကြာပြီ။ ယမင်း က ပိန်ပိန်သွယ်သွယ်လေး ဖြစ်နေပြီလေ။ ကိုအောင် ဆိုတဲ့ အကိုကြီးကတော့ ဗလတောင့်တောင့် ၀၀ ဖိုင့်ဖိုင့် ခန့်ချောကြီး ပုံစံမျိုး လူတွေ မြင်လိုက်တာနဲ့ လေးစားသွားမယ်။ နေတာထိုင်တာကတော့ အေးအေးဆေးဆေး ပုံစံပဲ။ ဒါပေမယ့် သူက စားဘဲကြီး ဖြစ်တာ ယမင်း သိသည်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေ ယမင်း စိတ်ထွက်ပေါက်တော့ ရှာချင်မိနေသည်။ ကိုအောင် က ယမင်းကို အားရင် အားသလို မထိတထိ ဖုန်းနဲ့ လှမ်းလှမ်းကလိပေးတတ်သည်။ အလုပ်နားရက်တွေ့ချင်တာတို့ ဘာတို့ပေါ့။ ဘယ်သူမှ မသိအောင် တွေ့ပါ့မယ် ယမင်း သိက္ခာ မထိခိုက်စေရဘူး ကတိပေးပါတယ်ဆိုပြိး ခဏ ခဏ ပြောတတ်သည်။
ဒါပေမယ့် ယမင်းက သူပြောတိုင်း ငြင်းငြင်း လွှတ်သလိုလုပ်သည်။ ယမင်း စိတ်ထဲကတော့ အဲ့ဒီလူကြိးရဲ့ တောင်းဆိုမှုကို လိုက်လျောချင်သည်။ အခုဆို ကြာလာတော့ ယမင်း စိတ်မထိန်းတော့ဘဲ ဒီတစ်ခါ ဒီဘဲကြီး ခေါ်ရင် တွေ့ဖို့ ခေါင်းညိမ့်လိုက်တော့မယ် စဉ်းစားထားသည်။ အဲ့ဒီ ဘဲကြီးက သူအားမှ ဖုန်းဆက်တတ်တာကြောင့် ၃ ရက် ၄ ရက်လောက်ကြာမှ ဖုန်းဆက်လာသည်။ ယမင်းလည်း ဟန်ဆောင် မနေတော့ပဲ ဟုတ်ကဲ့ အကိုကြီးတွေ့မယ်လေ ပြောသည်။ တွေ့မယ့်နေ့ကြတော့ ယမင်း အလုပ်မှ ခွင့်ယူထားလိုက်သည်။ သူငယ်ချင်းတွေ မေးတော့ နေသိပ်မကောင်းလို့ နားသည်ပြောထားလိုက်သည်။ နေ့လည်ပိုင်း အဲဒီ ဘဲကြီးက ယမင်းကို လာခေါ်သည် ။ ယမင်းလည်း လိုက်သွားလိုက်သည်။ ဘဲကြိး အိမ်တွင် ဘယ်သူမှ မရှိ။ အိမ်ရောက်သည်နဲ့ ယမင်း အပေါ့အပါးလေး သွားလိုက်သည်။ ဘဲကြီးက အခန်းထဲ ခေါ်သည်။ နှစ်ယောက်အိပ်မွှေ့ယာကြီး ပေါ်သို့ ယမင်းကို ထိုင်ခိုင်းလိုက်သည်။
ယမင်းလည်း စိတ်တွေ အရမ်းလှုပ်ရှားနေသည်။ ဘဲကြီးက ယမင်း ပါးပြင် တစ်ခုလုံး အားရပါးရနမ်းပြိး တွေ့ချင်နေတာကြာပေါ့ ယမင်းရယ်ဆိုပြီး နှုမ်းခမ်းလေးကိုပါ စုပ်နေတော့သည်။ ယမင်းလည်း စိတ်တွေ ပါနေပြီ ဖြစ်တော့ ဘဲကြီးက အ၀တ်တွေ အကုန်ချွတ်ပေးသည်။ ယမင်း ငြိမ်နေလိုက်သည် ဘဲကြိးက ယမင်း ပေါင်သွယ်သွယ်လေး နှစ်ချောင်းကို ကားခိုင်းလိုက်ပြီး ခေါင်းအတင်းဝင်ပြီး ယမင်း အဖုတ်လေးကို ဘာဂျာ ကျွေးတော့သည်။ ယမင်းက ငရဲကြီးတော့မှာပဲ ကိုကြီးရယ် ဆိုပြီး အတင်းငြင်းပေမယ့် မရ ဘဲကြီးက အတင်း လျှာဖျားလေးနဲ့ စောက်စိလေးကို ယက်ပေးသည်။ ယမင်း ဘယ်လိုခံစားရမှန်းကို မသိ စိတ်တွေ အရမ်းထန်လာသည်။ ဘဲကြိး ခေါင်းကို အတင်းဖိထားလိုက်မိသည်။ အား… အား…….အာ……ကိုကြီးရယ် ဘယ်လိုမြန်းလုပ်နေလည်း ယမင်း မနေတတ်တော့ဘူးကွာ ဘဲကြီး လီးကြိးကလည်း ထောင်မတ်နေသည်။ ယမင်လည်း လီးကြီးကိုကြည့်ပြီး အလိုးခံချင်စိတ်တွေ ဖြစ်နေသည်။
ဘဲကြီးက ဘေဘီ ကိုကြီး လိုးတော့မယ်ဆိုတော့ ယမင်း ခေါင်းလေးကို အသာလေး ငြိမ့်ပြလိုက်သည်။ ယမင်း ပေါင်လေးကို ကားလိုက်ပြီး ဘဲကြီးက လီးကြီးနဲ့ ယမင်း စောင်ပတ်အ၀ လေးကို တေ့ပြီး သွင်းလိုက်တော့သည်။ ယမုင်းလည်း အရမ်းတောင့်တနေတော့ အား……….ဆိုအော်ပြီး ဘဲကြီး ကို အတင်းဖက်ထားလိုက်သည်။ အရမ်းကောင်းတာပဲ ယမင်းရယ် …..တဲ့။ ယမင်းလည်း အရမ်းကောင်းတာပဲ ကိုကြီးရယ် ………….ဆိုပြီး အောက်ကနေ ပင့်ဆောင့်ပေးနေသည်။ ဘဲကြီးက အားရပါးရ ဆောင့်လိုး ပေးနေသည်။ အား……..ကိုကြီး………အား…………အား…. နာနာလေးဆောင့်ပါနော် ယမင်းအရမ်းကောင်းနေပြီ ဗွက် ဗွက် ဗွက် စောက်ရည်နဲ့ လီးအ၀င် အထွက်သံတို့ ဆူညံနေတော့သည်။ လောကကြီးကိုမေ့ထားပြီး ကာမစည်းစိမ်းကို ခံစားနေကြာတော့သည်။ ၁၀ မိနစ်လောက်ကြာတော့ ယမင်း ပြီးချင်နေပြီ ကိုကြီး လိုးစမ်းပါ အားရပါးရ လိုးပါ… ဘဲကြီးလည်း ……….ယမင်း စောက်ဖုတ်ကလေးကို အတင်းဆောင့်လိုးသည်…။
အား………အား……အာ…..ကိုကြီး ယမင်း……ပြိးတော့မယ်……လိုးပါ ကွာ……………။ ဘဲကြီး လည်း ပြီးတော့မယ် ဆိုပြီး အချက် ၂၀ လောက် ဆောင့်လိုးလိုက်တော့ ယမင်း ……အား …ဆိုပြီး ပြီးသွားတော့သည်။ ဘဲကြီးကတော့ ယမင်း အထဲကို သုတ်ရည်တွေ မထည့်ပဲ ယမင်း ဗိုက်ပေါ်သို့ ထုတ်လိုက်တော့သည်။ယမင်းလည်း ဘဲကြီးကို စွဲသွားလေတော့သည်။ စားဘဲကြီးမှန်းသိပေမယ့် ယမင်းအတွက်တော့ မက်မောစွဲလန်းနေမိတော့သည်။ အရမ်းကောင်းတာပဲ ယမင်းရယ် ဆိုပြီး နှစ်ယောက်သားအိပ်ပျော်သွားတော့သည်။ ညနေ တစ်ရေးနိုးလာတော့ နှစ်ယောက်သား တစ်ခါ လိုးလိုက်သေးသည်။ ပြီးတော့ ဘဲကြီးက ယမင်းကို အဆောင်ပြန်လိုက်ပို့ပေးသည်။ တစ်လ တစ်ခါလောက် တွေ့ကြမယ် ယမင်းရယ်ဆိုတော့ ယမင်း လည်း တွေ့ချင်တယ်လို့ ပြောလိုက်သည်။ ဘဲကြီးနဲ့ ယမင်း လတိုင်းလိုလို ချိန်းပြီး လိုးကြလေတော့သည် ….ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged မနတေတျတော့ဘူးကှ